Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ku soo wajahan Noorweey | Somaliska
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ku soo wajahan Noorweey
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dhawaan ku booqasho ku imaan doona magaalo madaxda Noorweey ee Oslo, halkaas oo uu ra’iisal wasaaruhu ugu qeyb gali doono kulan caalami ah oo loogaga arrinsano ammaanka caalamka.
Booqadan oo ah tii ugu horeeysay oo uu ku iman doono dalkaasi tan iyo markii loo magacaabay ra’iisal wasaare xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa la filayaa in uu kulamo la yeelan doono madaxda dalkaasi, saas oo ay tahay booqashada ra’iisal wasaaraha ayaa dadka qaar waxaa ay ka qabaan walaac la xirriira celinta qaxootiga Noorweey ee loo diiday magangalyada iyo kuwo dhawaan iyagana laga ceshtay dal ku joogi dalkaasi. Walaacan ayaa salka ku haya tuhun laga qabo in Noorweey ay heshiis dib loogu celinayo qaxootiga soomaalida la gasho.
Waxaa jiray warar la isla dhexmarayey oo sheegayey in wefdi ka tirsan dowladda Soomaaliya oo horey u gaaray Deenmark ay heshiis dib loogu celinayo qaxootiga soomaalida la gashay, balse aan xaqiijinta warkaasi jirin cid cadeeysa. Deenmark qudheeda ayaa soomaalida ku dhaqan waxaa ay mudooyinkii ugu dambeeysay hareeyeeey dhibatooyin la xirriira dib u celinta dad gaaray 16.00 oo qaxooti soomaali ah, kuwaas oo dowladu sheegtay ineey dub ugu celineeyso dalkoodi. Waxeey Deenmark sidoo kale sheegtay ineey qiimeyn ku sameeyneyso xaaladda qeybo ka mid ah Soomaaliya oo ay Noorweey iyo Deenmark aaminsan yihiin ineey amni ka jiraan.
Xirriiro ay shabakadda Somaliska.com la sameeysay dad ku dhaqan magaaladda Oslo ayaa sheegay in babaanbax cabasho ah laga sameeyn doon Noorweey taas oo ku aadan imaantinka wefdiga soomaalida. Soomaalidaku dhaqan dalalka Iskaandaneefiyanka ayaa la filayaa ineey ka qeyb qaataan banaanbaxaasi cabashada ah.
Dalalka Noorweey iyo Deenmark ayaa horey u shaaciyey ineey dad badan oo soomaaliyeed ay dalkoodii dib ugu celinayaan, halka qaar kalena dib u qiimeyn lugu sameeyn doono sharciga ku jooga dalalkaasi.